Zvakajairika - Guangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd.
Guangdong Meiling Internet Technology Co, Ltd yakavambwa muna2009, zvobva zvagadzira bhizinesi rekubatanidza pamwe nembiru indasitiri yekugadzira nekutsvagisa, zvemagetsi zvemabhizimusi, kusanganisa kutenga kwezvipo uye brand brand.
Yedu bhizinesi yakasanganiswa zviwanikwa uye zvakanakira nekutendeseka, kutenda uye kuda chinzvimbo. Kwemakore akati wandei, Meiling yakawana yakadzikama-nyika kukura nekutsvaga kweye bhizinesi modhi muinternet nguva, yakabatana neepamba uye mhiri kwemakambani anozivikanwa mabhizinesi. Parizvino, Meiling ine inofadza akawanda maronda einternet- Konka, Changhong, Nontaus, Daewoo, TER, MAK, BTSM. Imwe neimwe yadzo ine yayo musika positioning, kugutsa zvakanyanya vashandisi 'sarudzo yekusarudza kubva munzvimbo dzakasiyana uye nekubudirira kugadzira "Meiling Internet +" chikuva. Munguva yeinternet, "Meilling Internet +" inobatsira kuti ishanduke kuita bhizimusi reInternet chairo, kuita pamwe chete kugadzira win-win exosphere nemakwikwi epakati pekuvimbika.Kupfuura makore gumi- kukura, isu tine ruzivo muODM pamwe neOEM. Neye yedu yekutanga chigadzirwa uye sevhisi, isu tasimbisa yakanaka bhizinesi kudyidzana nevatengi mune epamba uye mhiri kwemakete musika.
"Meiling Internet +" inosungirwa kuve gwara reinogara ichichinja bhizinesi modhi mune ramangwana.
Meiling inyanzvi yekutengesa midziyo yemumba kunyanya inosanganisira mudziyo wekicheni, mudziyo wemumba, kutonhodza mweya, kutapudza & kuchenesa, tanga tichishanda pane mudziyo wemumba muChina kweanopfuura makore gumi. Kunze kwekugadzira ine simba uye yakasarudzika Internet + Ecological System. Isu zvakare tine sarudzo dzakasarudzika kubatsira vatengi kuti vagadzirise cheni yavo yekupa kune dzakasiyana nzira.
Yedu yekutengesa timu inovavarira kugutsa vatengi nemabasa akanaka kwazvo. Zvakare, zvichibva pahukama hwedu hwepedyo nevatengi, isu tinogara tichigona kuwana rwekutanga ruoko ruzivo kubva kumusika uye nekuvandudza iwo chaiwo mamodheru emhando kusangana nezvinodiwa nevatengi.Gore rega rega, isu tinokwanisa kukudziridza 3-5 zvinhu zvitsva zvinoenderana nemusika maitiro uye zvinodiwa nevatengi, izvo zvinonyanya kusimbisa kukwikwidza kwedu pamusika zvichibva pane yedu inonzwisisika kotesheni. Kupfuura makore gumi- kukura, isu tine ruzivo muODM pamwe neOEM. Tiine yedu yekutanga chigadzirwa uye sevhisi, isu tasimbisa bhizinesi rekudyidzana rakanaka nevatengi mumisika yekumba neyekunze kwenyika vanogamuchirwa. Kana iwe uchifarira chero chezvinhu zvedu kana uchida chero rumwe ruzivo, pls usazeze kutibata nesu. Tiri kutarisira kushandira pamwe newe munguva pfupi iri kutevera.
Kukwikwidzana KweOversea Musika
Yakasiyana-siyana yekupa cheni
Chigadzirwa Kuvandudza & Tech.Support
Unogona Kutarisana Nematambudziko?